inqubomgomo Credit yebhange commercial - lokhu kuyinto idokhumenti yangaphakathi ebhange nge owawuthi indlela eyisisekelo abolekise nezimfuneko ababoleka, ngenxa yesimo sezomnotho samanje. inqubomgomo Credit ka ngamabhange uyakwazi ukuveza ifilosofi (indlela evamile, umqondo) credit imisebenzi amabhange, ukusungula imisebenzi amasu nohlaka Dunn. Ukuze kulungiswe le nkinga, noma ngasiphi commercial yasebhange, imisebenzi ehamba phambili pokreditovaniyu, nanso is ncele ezithile ngesikhathi sokukhishwa wesikweletu.
Yemfihlo - umhlahlandlela jikelele ukwenza isenzo esithile amasevisi Credit ebhange. Inqubomgomo Ikhredithi ebhange commercial Ubuye inkinga, ngakolunye uhlangothi, ukunciphisa izingozi ibhizinisi esingokwemvelo, futhi ngakolunye, ukuze kulondolozwe niche okubanzi labo abangase babe abathengi umkhiqizo credit.
Inqubomgomo Ikhredithi ebhange commercial Ubuye iwumgomo oyinhloko - a inzuzo kakhulu izindawo nezikweletu (kanye Luhambo imali kanye imali) ngomkhiqizo loan ebhange futhi ngesikhathi esifanayo zigcinwe izinga elithile izinga loan iphothifoliyo kwamabhange. On izinga loan iphothifoliyo ithonywa loan ngokuyinhloko sekwephuzile nezinye izikweletu inkinga. Sekwephuzile - Isikweletu ukuthi bamenanisele ngesikhathi, futhi ukugcwaliseka nezibopho umboleki izocubungulwa loan. Inkinga isikweletu isikweletu has a izimpawu ngqo noma ngezinye izindlela izinkinga phakathi inkonzo credit ababoleka nokugcwaliseka esifike izibopho umboleki ukuze ayemkweleta amabhange. loan qualitative kuyinto loan okuphephile, okuyinto wabohla ngendlela esifike ngesikhathi ngaphandle kokuchitha izinkinga kanye nobunzima ka umboleki.
Ngaphezu kwalokho, amabhange kumele athobele ukulinganisela okunengqondo phakathi engenayo kanye ingozi. It is ukusetha i-nasekusetjentisweni kwenchubomgomo credit amabhange abafuna ukwehlisa ubungozi esiphansi, ethola ngalesi imisebenzi ngenzuzo esiphezulu. izenzo Lapha ezinjalo ingozi credit yebhange commercial iba Inqubomgomo minimalnym.Kreditnuyu kuthatha ukuphathwa eliphakeme yasebhange (umqondisi noma ibhodi ibhange), esebenzisa le dokhumenti losegunyeni ukuba umculi ngamunye - isisebenzi somnyango credit. Ngokwemvelo inqubomgomo Ikhredithi ngamabhange delineates isinqumo, igunya lokufeza izenzo ezithile, imisebenzi. inqubomgomo Credit amabhange lezentengiselwano lithuthukise ezivamile yokusondela imisebenzi uboleka, ikakhulukazi uma kukhona inethiwekhi amagatsha e-credit yenkampani. Ngale ndlela, indlela Kumiswa, abanquma jikelele Inqubomgomo abolekise amaklayenti ngamabhange ', inquma hlobo lwekhadi sinikezelwa, igunya kunoma yiliphi izinga ebhange ngoba ukwamukelwa of umagazini ngamunye, kanye imininingwane zokusebenza izinqubo credit. Le mfuneko kwale nqubomgomo amabhange Inqubomgomo credit isimo emakethe wamanje. Ukuze sisekele inqubomgomo Ikhredithi ngamabhange, kubalulekile ukuba njalo futhi zizilungise labo postulates kulo eyenziwa uma kunesidingo. Ukubukeza Inqubomgomo sesikweletu, njengenjwayelo, okungenani kanye ngonyaka. Isimo somnotho, okuyinto kaningi sishintsha, inqubomgomo credit ibuyekezwa kaningi. Ubani nje omunye ngaphandle izisebenzi credit, nsuku zonke ibhekene ezahlukene, uma ngokuvamile ongavamile ku ukusebenza iklayenti, bheka isihloko esithi "nomzimba omncane" isikhala inqubomgomo kanye ungenza isiphakamiso ezinengqondo ukukulungisa. Ibhange uzama acabangele eduze ngangokunokwenzeka ezingokoqobo yesimanje yokuphila credit isu. Sicela uqaphele ukuthi inqubomgomo Ikhredithi amabhange akuyona okuphambene nemithetho esebenzayo isimo, kanye nokuthuthukiswa komnotho jikelele.
Iyini inkokhelo yinhlama-sum kanye imiklomelo
Imithombo utshalomali. imithombo ngaphakathi kanye nabangaphandle.
Domodedovo Airports scheme, ezikhumulweni, ingqalasizinda
Yena Gemini, Gemini kuyinto: Umshado kwedivayisi. kwedivayisi Gemini empilweni ezivamile
I umhlanganyeli we ngokoqobo show "Indlala" Karina Sabirzyanova: Biography wakhe kanye nempilo yakho